Turkiga oo shaqaalihiisa ka daad-guraystay Soomaaliya. - Awdinle Online
Turkiga oo shaqaalihiisa ka daad-guraystay Soomaaliya.
Dowladda Turkiga ayaa si rasmi ah waxa ay u bilowday in ay muwaadiniinteeda kala baxdo caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sabab la xiriirta cabsida laga qabo faafitaanka xanuunka Coronavirus oo aduunka ku dilay in ka badan 200,000 oo ruux.
Go’aankaan ayaa ka soo baxay madaxweyne Turkey Recep Tayib Erdogan, wuxuu kamid yahay talaabooyinka lagu xakameynayo cudurka oo dhibaato ku haaya guud ahaan Caalamka.
Qoraalka oo lasoo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa daabulitaanka muwaadiniinta ku sheegay “ku maalgaar” balse ma aysan muddeynin xiliga ay ku eg-tahay, inkasta oo ay taagan tahay walaaca laga qabo Covid-19.
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa xaqiijiyey in ka badan 390 kiis oo ah Covid-19 guud ahaan Soomaaliya, waxaana u dhimatay 18 ruux kale sida wasaaradu xaqiijisay Sabtidii.
Turkiga ayaa soo wariyey 108-kun kiis oo ah caabuqa faafa, in ka badan laba kun qof oo geeri ah iyo 25,582 oo illaa iyo haatan ka caafimaadey.
Diyaaradda Turkish Airlines oo qaadaysa Shaqaalahaan ayaa xalay Magaaladda Muqdisho keentay ku dhawaad 58-qof oo Soomaaliya, kuwaa oo muddooyinkii dambe ku xayirnaa dalka Turkiga.
Rakaabka diyaaradda waxaa kamid ahaa Guddoomiyaasha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo waayihii dambe ku sugnaa Turkiga balse saameyn taban safarkooda ku yeeshay xannibaadda duullimaadyada caalamiga ah ee ka dhalatay Coronavirus.
Soo qaadista dadkaan waxa ay ka dambeysay kadib markii qaar kamid ah Jaaliyadda Soomaalida Turkiga kunool ay Mustaqbal la wadaageen xaaladda ay ku sugan yihiin dad qaarkood dano caafimaad u tagay Turkiga, kuwa waqtiga uu ka idlaaday iyo shaqsiyaad kaga sii gudbi waayay Dalalka Yurub, isla markaana aysan awoodin lacagaha uga baxaya joojista Turkiga.
Go’aanka ay muwaadiniinta Turkiga uga baxeen Muqdisho ayaa kusoo aaday maalmo kadib markii ay khadka telefoonka kuwada hadleen hogaamiyeyaasha labada dal oo isla soo qaadey arrimo kala duwan.
Xukuumadda Ankara ayaa xulafa dhow la ah dowladda Soomaaliya waxayna bil walba siisaa lacago lagu kabayo Miisaaniyadda dowlada federaalka Soomaaliya, Mashaariic hormarineed iyo tababarada Ciidanka iyo Saraakiisha Soomaaliyeed.
Previous articleGuddoomiye Cumar Filish oo guryahooda ku booqday qoysaska labadii qof ee xalay la dilay
Next articleAl Shabaab oo dhowr gantaal ku tuurtay Xereda Xalane